About Us - I-Zhongshan City Jiawang Metal Products Co, Ltd.
Zhongshan City Jiawang Metal Products Co., Ltd. kuyinto
ngokukhethekile ukuklama nokukhiqiza i-stainlishi ekhishini lensimbi iyacwila, elibekwe eDongfeng Town, Zhongshan City, eSifundazweni saseGuangdong.
Sinefekthri yethu yokubumba yokubhekana nebhizinisi elikhulayo futhi ihlangabezana nezidingo zamamodeli amasha. Njengamanje, amamodeli ahlukahlukene angaphezu kwe-100 atholakala efekthri yethu. Futhi sisakha amamodeli amasha angaphezu kwama-20 njalo ngonyaka.
Asigcini ngokuhlinzeka ekhishini kuphela, kepha futhi nemibono yamakhasimende ethu.Ubudlelwano bebhizinisi obuhlala isikhathi eside nobunqobayo buqhutshwa kakhulu enkampanini yethu.Choose Jiawang, Selectyourdevelopingbusiness.
Umbono Wethu: Ukwakha umkhiqizo ongabizi kakhulu
qhubeka ukulalela nokuhlangabezana nezidingo zabasebenzisi, ukuqondisa nokudlula izidingo zomsebenzisi, futhi uwine theukubonwa kwabasebenzisi;
Ngokuphakamisa isimo samabhizinisi nesithombe somkhiqizo, ukuze abasebenzi abanomqondo ophakeme we inhlonipho nokuziqhenya, win abasebenzi abahlonishwayo ;.
Thuthukisa ukuthuthukiswa okunempilo komkhakha we-Intanethi, nabalingani ukukhulisa nokunqoba imboni inhlonipho;
Gxila kumthwalo wemfanelo webhizinisi, unakekele umphakathi, ubuyisele emphakathini, uwine inhlonipho yomphakathi.
Amanani Wenkampani: Ubungcweti, Ukuzinikezela, Ubuqotho, neWin- win
● Ukuqamba okusha kuhlose ukudala inani lamakhasimende;
● Wonke umuntu angakha, konke kungaba nobuciko;
● Isibindi sokuzama, ungesabi ukwehluleka, okuhle ukufingqa
Ifilosofi Yebhizinisi: Inani Labo Bonke Abasebenzisi
Gxila ekuthuthukisweni kwesikhathi eside hhayi ngenxa yezintshisekelo zebhizinisi ezilimaza inani lomsebenzisi, Ukukhathazeka nokuqonda okujulile kwezidingo zamakhasimende, futhi njalo ukwenza kahle emikhiqizweni nemisebenzi yokuhlangabezana nezidingo zomsebenzisi;
Ukubaluleka kokuxhumana okungokomzwelo nabasebenzisi, inhlonipho ngomuzwa womsebenzisi, ukukhula nge abasebenzisi.
Umsebenzi Wethu: Ukuhlinzeka Amakhasimende Ngokucwila Okungabizi kakhulu, Ukungeza Inani Kumikhiqizo Yethu Futhi Ukuthuthukisa Insiza
Yenza imikhiqizo nezinsizakalo kududuze futhi kuthokozise abantu;
Gxila ezifundeni ezahlukahlukene, amaqembu ahlukene, izinto ezihlukile futhi unikeze nezinsizakalo zemikhiqizo ezahlukanisiwe;
Dala ipulatifomu evulekile ne-win-win, sebenza nabalingani ukudala imvelo enempilo ye-Intanethi.